मैले अनुहार लु’काएँ भने मलाई ए’सिड हा’न्नेको जि’त हुन्छ ,म फेरि विद्यालय जान चाहन्छु : मुस्कान खातुन
मुस्कान खातुन, त्यो विहान (भदौ २० गते) करिब ६ बजे म विद्यालय जाँदै थिएँ। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुने भएकाले विहानै विद्यालय जानुपर्थ्याे। अरु दिन बुवाले भाइ र मलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याइदिनु हुन्थ्यो। तर, त्यो दिन उहाँलाई सञ्चो थिएन। त्यसैले, म र भाइमात्रै विद्यालय गइरहेका थियौँ । भाइ मभन्दा पछाडि हिँड्दै थियो, म चाहिँ अलि अगाडि। बाटोमा मलाई सधैं सताइरहने एउटा केटाले जग दिँदै भन्यो – पानी खाने हो? खाऊ! म नखाने भन्दै ऊसँग त’र्किएर फ’टाफट अगाडि बढेँ। उसले मलाई मेरो नाम लिँदै पछाइरह्यो। म रोकिइनँ।
अलि पर पुगेपछि यसो हेरेको – उसले मेरो जी’उमा त्यो जगको पानी ख’न्याउन खोज्दै रहेछ! मैले स्कुल ब्याग उचालेर ह’त्त न प’त्त अनुहार छोपेँ। त्यो जगमा पानी होइन, ए’सिड रहेछ! म ज’ल्न थालेँ। लाग्यो – मलाई जी’उँदै ज’लाइँदै ! मैले पहिले पनि एक दुई चोटि ज’लन सहेकी थिएँ, झु’क्किएर आगो छोइपठाउँदा। तर, ए’सिडको ज’लन त आ’गोको भन्दा धेरै पी’डादायी हुँदो रहेछ। अनुहारको दायाँ भाग, छाती र हातमा ए’सिड परेछ। बाटोमा हिँडिरहेका अरू विद्यार्थी साथीहरू मतिर दौडिँदै आए। कसैले मेरो बुवाको नम्बर सोध्यो। मु’श्किलले बुवाको नम्बर दिएँ।
त्यसपछि म बे’होशमा भएँ। पछि थाहा पाएँ–मलाई नारायणी अस्पताल ल’गिएछ। हो’शमा आउँदा मैले आफूलाई स’म्हाल्न सकिनँ। हातले अनुहार छा’म्दै रोएँ। अरूले हौ’सला त दिन्थेँ, तर त्यसले मलाई खासै छुँ’दैन थियो । त्यो घडीमा मलाई केही कुराले टु’ट्न दिएको थिएन भने त्यो हो – परिवारको माया र सहयोग। नारायणी अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि मलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पताल ल्याइयो । मेरो उपचार अझैं सकिएको छैन। मलाई कतिले सोध्छन्–ए’सिड हा’न्ने केटासँग पहिले प्रेम सम्बन्ध थियो ? वा, उसले मलाई प्रेम गर्थ्याे?
मलाई ए’सिड हा’न्ने स’म्साद मियाँ र हा’न्न लाउने मा’जिद आ’लमप्रति म प्रेम त के,कुनै भा’व नै राख्दिन थिएँ। उनीहरू मलाई विद्यालय जाँदा प’छ्याउँथे। म खु’रूखुरू आफ्नो बाटो लाग्थेँ। त्यो घ’टना हुनुभन्दा केहीअघि म उनीहरूबाट आ’जित भइसकेको थिएँ। मलाई उनीहरूको बारेमा आमालाई भनेँ ।आमाले बुवालाई भन्नु भएछ। बुवाले उनीहरू स’म्झाउनु भयो, त्यस्तो ह’र्कत दो’होरिए थ’प्पड हान्ने ध’म्की पनि दिनुभयो ।उनीहरू केही दिन त मेरो पछि ला’गेनन्, तर त्यसपछि त्यही क्रम दो’होरिन थाल्यो।हो’श आएको कति दिनपछि मैले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेँ।
मैले आफूलाई चि’न्न सकिनँ। लाग्यो– म मुस्कान होइन। डाक्टर, आफन्त र साथीहरूले मलाई ढा’डस दिए। धेरैले मोबाइलमार्फत् भिडियो स’न्देशहरू पनि पठाए। ए’सिड प्र’हार वि’रोधी अ’भियानकर्मी उज्ज्वल विक्रम थापाको शब्दहरूले मेरो मन छोए। उहाँ भन्नु हुन्थ्यो – तिमी कोठाभित्र लु’केर बस्यौ भने ए’सिड हा’न्नेहरूको जि’त हुन्छ। तिमी हा’र्छौँ। उनीहरूलाई जि’त्नु छ भने आफैंसँग ल’ड, लु’केर नबस, बाहिर जाऊ। मैले, उहाँको कुरालाई मनन गरेँ। र, आफ्नो अनुहारसँग त’र्सेर आफूलाई कोठाभित्र कै’द गर्नुभन्दा स’माजमा घु’लमिल हुने आँ’ट गरेँ।
यसैले, म आज तपाईंहरूसामु उ’भिन सकेकी छु। म अब फेरि वैशाखदेखि विद्यालय जान चाहन्छु। नौ कक्षामै भर्ना हुन्छ । पढेर डाक्टर बन्न चाहन्छु। तर, नेपालमा मजस्ता मुस्कानहरू सु’रक्षित छैनन्। मधेसमा बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अ’भियान सुरू भएको छ। तर, विद्यालय जाने बेटीलाई सु’रक्षा दिन सकिएन भने अ’भियानको औ’चित्य के?